I-Izotope RX: Ungayisusa njani ingxolo yangasemva kwiiRekhodi zakho zeLizwi | Martech Zone
NgoLwesibini, Septemba 12, 2017 NgoLwesibini, Septemba 12, 2017 Douglas Karr
Akukho nto ithukayo njengokubuya ekhaya usiya kumsitho, ubeke ii-headphones zakho ze-studio, kwaye uqikelele ukuba bekukho itoni yengxolo yangasemva urekhodo lwakho. Yiloo nto kanye eyenzekileyo kum. Ndenze uthotho lokurekhodwa kwe-podcast kumsitho kwaye ndakhetha ii-microphone ze-lavalier kunye ne-Zoom H6 rekhoda.
Besingenayo indawo enikezelweyo yokurekhoda, sihleli nje etafileni kude nezihlwele… kodwa ayincedanga kwaphela. Ukuba bendinomxube wam kunye nezinye ii-microphone zestudiyo, bendinokuyilungisa imvelaphi kodwa ezi zinto zincinci zithathe zonke izandi! Ndityumke.
Ke, senze uvavanyo ngezixhobo zoPhicotho-zincwadi zokususa izandi zangasemva kodwa ukuba silungelelanise useto, ilizwi laqala ukuvakala li-wonky. Ndithumele umba kwiforum yam endiyithandayo kunye nomhlobo wam omangalisayo, UJen Edds kucetyiswa kwangoko Izotope RX6, isixhobo esizimeleyo sokulungisa iifayile zeaudiyo.
Ngaphandle kwalo naluphi na uqeqesho okanye ndade ndibukele ividiyo ye-YouTube, ndiye ndaphuma ingoma yam eyoyikisayo kwisixhobo, ndicofa Ilizwi De-ingxolo, kwaye ndaphantse ndamanzisa ibhlukhwe yam ngelixa ndimamele ingxolo yangasemva inyamalala ngokulula!
Ukuba ucinga ndiyayenza le nto… ndaya phambili ndaza ndabelana ngesiqwengana seziphumo. Iyothusa ngokuqinisekileyo! Inqaku elisecaleni- khange ndiyibalise le nto kwisitudiyo sam, ndisebenzise nje imicrosoft mic kwiGarageband ... ke sukundigweba.
I-Izotope RX6 Voice De-ingxolo okwangoku iyathengiswa nge $ 99 ukusuka kwi- $ 129. Oku kuyimfuneko kuyo nayiphi na ipodcaster ezifumana zilwa nengxolo yangemva kurekhodisho lwabo - ukusuka kunqakrazo, ukuya kwihms, ekucofeni, kunye nokunye. Ndisebenzise nje imowudi eguqukayo kunye nokuseta kwangaphambili, kodwa ungasebenza kwifayile yakho yeaudiyo ngokungathi ikwiFotohop enenani lezinto ezakhelwe kwizixhobo.
Thenga i-Izotope RX6 Voice De-ingxolo
tags: ingxolo yangasemvaIngxoloizotopeizotope rxIzotope rx6susa ingxolo yangasemvasusa ingxolo